Fampidirana ny Ivotoerana R&D
Ny r & d afovoan'ny shandong landian biotechnology co., Ltd. dia vita ary napetraka tamin'ny 2014. Ny foibe r & d dia mandrakotra ny velaran'ny 2010m2, ary ny totalin'ny fampiasam-bola amin'ny fitaovana amin'izao fotoana izao dia nahatratra 5,5 tapitrisa yuan. "laboratoara injeniera weifang", "foibem-pikarohana momba ny haitao sy teknolojia weifang", "tobim-pikarohana siantifika akademika", ary nanasa an'i akademia Yang shengli sy ny ekipan'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ho an'ny fitarihana teknika maharitra amin'ny foibem-pikarohana sy fampandrosoana. Ny foibem-pikarohana sy ny fampandrosoana dia nametraka ekipa fikarohana sy fampandrosoana misy ny mpianatry ny tompony 5 amin'ny mari-pahaizana mifandraika amin'izany ary 14 nahazo diplaoma amin'ny oniversite sy mpianatra amin'ny oniversite zandriny. Hatreto dia nahazo patanty famoronana 3, patanty modely 10 ilaina ary zava-bita siantifika sy teknolojia hafa.
Ny ivon-toerana R & D dia misy efitrano tsy misy fangarony 100 ambaratonga, fitaovana fanandramana fermentation 5L miisa 14, fitaovam-panadinana pilotan'ny fermentation 50L roa tonta, rafitra fifanakalozana ion mitohy, chromatographi ranon-javatra avo lenta, chromatografin'ny entona, andiany roa an'ny tanky fanamasinana fitoviana. , vata fampangatsiahana maripana ambany-ambany, fonosana seramika fitsapana kely, membrane ultrafiltration, membrane nanofiltration ary fitaovana fanandramana mikraoba hafa; Mandritra izany fotoana izany, fitaovana polymerization polymerization fitaovana polymerisation vaovao ary fitaovana fanandramana polymerization vy 20L; arakaraka ny filan'ny orinasa miaraka amin'ny fitaovana fikarohana teknolojia avo lenta, ny fananana raikitra efa mihoatra ny 10 tapitrisa.